Welcome to SomTrans
Dealing with us is reducing risk, ensuring top efficieny, and having the best professionally trained and expert on your side to expedite your cargo and ships operations.
SomTrans waa shirkad laga aasaasay dalka Germany magaalada Frankfurt a.M, sanadkii 201/.
Waa shirkadii ugu horeysey ee nooceeda ah laga aasaaso Gobalka Hessen, taaso kuu qaadeysa alaabta nooc walba, bagaash, baabuur, qalab dhisme, motooro, alaab baayacmushtari, i.w.m.
SomTrans waxay diyaar kuula tahay macmiil hagaagsan oo dhan walba.
Waxaan xidhiidh la leenahay shirkada waa weyn ee xamuulka ee ka hawl gala wadanka sida DB SCHENKER, aramex.
Waxaan geynaa alaabada dekad walboo ku taala geeska Afrika ah iyo magaalooyinkaba.
Waxaan ku siin wax alaale wixii macluumaad ah ee aad u baahantahay, hadey noqoto alaabada aad dirayso, cashuuraadka dekadaha iyo talooyin ku aadan sida ugu wanaagsan ee aad u xidhxidhi karto alaabtaada iyo baabuurta aad direyso.
Shirkada Somtrans waxay kuugu bushaareynaysaa inay kuudiyaarisay wax kasta oo aad uga bahaantahay Seafreight, hadaad Voll-Container ama half-Container doonayso waxaa kuu fudaydinaysa SomTrans. Waxan sidoo kale kuu qaadaynaa alaaba yar-yar Meel kasta oo aad wadankii hooyo ka geynayso. hadi aad doonayso in Gawaadhi yar iyo weynba laguu qaado Fadlan Nalasoo xidhiidh.
SomTrans waxa kale oo ay macaamiisha shafta leh u diyaarisay Airfreight toos u tagaya Hargeisa iyo Muqdisho, hadii aad doonayso in si degdeg ah lagugu geeyo meeshad rabto waxaan ku balan qaadaynaa inaan si deg-deg iyo Amaano kuugu geyno. Fadlan La soo xidhidh SomTrans Frankfurt Airport.
SomTans waxay sido kale kuu diyaarisay hadad wadanka Germanay uga bahantahy In laguu Raro Gurigaga waxaan diyaar kuula nahay inaan mesha aad joogto kuugu nimaadno, Fadlan hadii aad u baahantahy in lagaa caawiyo Transopt Wadanka Gudihiisa nooc kasta uu yahay waxaan diyaar kuula nahy adeeg hufan.
SomTrns waxay kugu soo dhawenaysa gacmo furan, qiimo ku qanciya, iyoadeg Hufan,